काठमाडाै । चुनाव हारेर कामचलाउ सरकार चलाउदै अाएकाे देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्ति र सिफारिसहरू अाेली सरकारले बदर गर्ने भएकाे छ । देउवा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति ले मुलुकलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै सबै निर्णयहरु वाम गठबन्धनको सरकारले एकमुष्ठ रुपमा खारेज गर्ने भएको हाे ।
कामचलाउ सरकारले बिभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत दर्जनौं राजनीतिक नियुक्तिहरु गरेको छ । यसका साथै राष्ट्रियसभाका लागी राष्ट्रपति समक्ष पठाइएका तिनजना सांसदकाे सिफारिस पनि अाेलीले बदर गर्न लागेका हुन । शेरबहादुर देउवा सरकारले जाँदाजाँदै राष्ट्रियसभा सदस्यका तीन सदस्य मनोनयनका लागि गरेको सिफारिस थियाे जुन अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको छ । जुन अबकाे नयाँ सरकारले ३ सांसदको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेकाे छ ।
संविधानअनुसार राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ३ जना मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले कांग्रेस कार्यकर्ता कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले सो सिफारिस अध्ययन गर्न बाँकी रहेको र परामर्श गर्नुपर्ने भन्दै थन्क्याएको थियो ।
सरकारमा बस्दा देउवाले अाफुखुसी गरेकाे र देशलार्इ अार्थिक भार पर्ने गरी काम गरेकाे भनि वामगठबन्धनले अालाेचना गर्दै अाइरहेकाे थियाे । कतिपय नियुक्ति र विभिन्न ठाउमाँ ब्याकडेटमा समेत गरिएको नियुक्तिहरूलार्इ एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्न लागेकाे हाे ।
प्रकाशित : शुक्रबार, फागुन ०४, २०७४१४:४४
किन गएन माओबादी केन्द्र सरकारमा: आखिर केले रोकियो पार्टी एकता ?
डा. देवकोटा पार्थिव शरीरलाई दिउँसो १ बजे सम्म श्रद्धाञ्जली दिन पाइने !
बम्जन आश्रमबाट दुई महात्मा गुरु गिरफ्तार , हत्या र बेपत्ता घटनाको अनुसन्धान तिब्र !
काँग्रेस नेता घिमिरेको निधनप्रति दुःख
प्रक्रियामा नअल्झिइ विकास निर्माणका काममा गति दिन प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन